Ahoana ny fambolena amin'ny mulch ary tsy miasa tany - Ikkaro
firosoana >> zaridaina >> Patch legioma >> Ahoana ny fambolena amin'ny mulch ary tsy miasa tany
Inona daholo izany rehetra izany
Holazaiko tsotra izao aminao ny fomba nanomanako ilay zaridaina niaraka tamin'ny hevitra nalaina avy amin'ny permaculture, bilaogy ary fantsona YouTube. Miaraka amin'ny tanjona 2
Sorohy ny fisehoan'ny ahitra na ahidratsy adventitious izay manafika ny zaridaina iray manontolo foana.
Fadio ny miasa tany sy miasa ny tany.
Amin'ny faritra maina dia ampiasaina ny padding mololo, raha mipetraka amin'ny faritra mando be ianao dia amboarina zezika. Eto dia hampiasaina ho zezika ny zezika.
Rehefa nanomboka niasa ny zaridaina aho dia toy izao.
Mety tsy dia ankasitrahana firy izy ireo fa ireo zavamaniry ireo dia mihoatra ny 1,5m aorian'ny lohataona misy orana be dia be ary nilaozana tanteraka ny zaridaina.
Tsy dia manam-potoana hikarakarana azy aho. ny fotoana betsaka indrindra natokako ho azy dia amin'ny fahavaratra.
Manomboka manamboatra ny zava-drehetra aho mba hiezaka hitazona azy io tsy tapaka miaraka amin'ny ezaka kely kokoa.
Manomboka amin'ny fanadiovana ny ankamaroan'ny faritra izay hampiasainay ho an'ny legioma, sns. Tsy miseho amin'ny sary izy io fa tena mahagaga.
Tamin'izany fomba izany no nanapahanay ireo zava-maniry amin'ny haavon'ny tany. amin'ny toe-javatra mahazatra dia mety ho ampy izany ary vitantsika izany. Tsy maintsy nampiasa ilay kapila aho ary avy eo namela azy tamin'ny tany tariby vy izay mahery vaika kokoa noho ny nylon mahazatra.
Mijanona ho toy izao ny tany.
Hararaotiko ny fametrahana efa misy ny fanondrahana rano mitete, na dia tsy mivoaka amin'ny toerana tiako aza izy io, fa hanitsy azy aho.
Rehefa avy nanadio ny borosy dia handeha hamboly mivantana aho nefa tsy hiasa ny tany fa mafy, mafy be ary misy tsy fitoviana betsaka. Ary ambonin'izany rehetra feno ahitra. Ary ny ahitra, raha mamela faka isika, dia hitombo be tokoa ka tiako ny manala faran'izay betsaka araka izay tratra. Ho fitsaboana voalohany ny tany ary avy eto hanohy tsy hiasa tany.
Satria mafy dia mafy ny tany ary tsy nanampo ny orana izahay dia nandena ny tany mba hanalefaka azy. Tsy manana traktera aho, tsy maintsy miaraka amin'ny hoe. Rehefa avy mando azy dia avela 2 na 3 andro mandra-pahitanao fa afaka mandeha tsara.
Toy izao no fijery azy rehefa avy niasa tamin'ny angady izy ary nandrovitra azy
Loose tany izay ezahako hatsaraina rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'ny zezika. Amin'izao fotoana izao dia izay misy. Tena mafy sy tanimanga.
Namoaka fakany ahitra marobe aho ary izay sisa tavela dia azo antoka fa hahatonga antsika hanaiky lembenana. Isaky ny tranonkala dia manana ny tsimparifary izay ratsy indrindra sy sarotra fehezina izy ireo. Ao amin'ny zaridainako ny ahitra mahazatra (Dactylon Cynodon) sy dipoavatra (Mentha spicata). Niakatra tamin'ny fambolena indray mandeha izahay ary niely toy ny pesta.
Ny firakotra dia sosona izay apetratsika eo ambonin'ny tany mba hahafahany mahatanty ny hamandoan'ny tany. Fitaovana maro no azo ampiasaina, manomboka amin'ny fanapahana ny sisa tavela, hatrany amin'ny hodi-kazo sns. fa hampiasa mololo aho.
Ampiarahiko amina sosona baoritra ny mulch mba tsy hivoahan'ny ahidratsy. Sarona ireo ary rehefa tsy mahita ny masoandro dia ho faty izy ireo. Ny olona sasany dia mampiasa plastika mainty amin'izany, mivarotra horonan-taratasy polyvinyl ho an'ny fambolena izy ireo. fa tsy faly aho. Tiako kokoa ny baoritra noho izy hihena sy hiditra amin'ny tany.
Karazan-baoritra roa no nampiasako, tamin'ny baoritra iray tanana avy amin'ny boaty fanaka sy avy tany Amazon, fa satria tsy nanana ny ampy aho dia nividy horonam-baoritra avy tamin'i Leroy Merlin. Raha hividy ianao dia jereo fa misy 2 mitovy, ny iray eo amin'ny faritra fonosana (€ 2 mandritra ny 9m) ary ny iray eo amin'ny faritra fandokoana (€ 10 mandritra ny 8m). Ka raisinay ilay loko.
Ny fametrahana ny drip lehibe indrindra dia efa nangonina. Ny tsiranoka vita amin'ny volo vita amin'ny kofehy nentim-paharazana dia nampiasaina tamin'ny driper izay teo amin'ny fambolena anao. Eto koa aho hanavao.
Hampiasa fingotra exudation 16mm mifanaraka amin'ny fifandraisana nentim-paharazana miaraka amin'ny tahan'ny 4L ora aho. Misy karazany maromaro arakaraka ny fikorianan'ny (zaridaina sy zaridaina) mamoaka rano bebe kokoa ny zaridaina.
Nanararaotra ny fametrahana voalohany izay efa nataoko aho. Nisalasala ny amin'ny fisarahan'ny kodiarana aho. Raha mametraka tadiny 3 ianao hiteraka velarana iray manontolo hambolena. Satria ny fantsom-pamoahana exudation misy tsindry ampy mandena ny tany manodidina ny 12-15 cm amin'ny lafiny roa amin'ny fingotra. Miaraka amin'ny 3 dia ho nanana tadiny 60 cm lena foana aho.
Amin'ny farany dia avelantsika hitanao amin'ny sary izany. Ara-potoana foana ny fanovantsika azy raha te hanandrana isika.
Ity fitambaran-tsolika exudate, baoritra ary mololo ity dia miteraka hamandoana be ao an-jaridaina ary mihanaka ny sifotra sy slug.
Miaraka amin'ny tany niasa sy nopetahana ary nandeha ny kodiarana. apetrantsika eo amboniny ny baoritra. Jereo fa rehefa avy nametraka azy aho dia nasiako penina izay alehan'ny fingotra rehefa mikasa ny hahafantatra izay hanaovana ilay lavaka isika.
Ity no andiany voalohany nataonay. Aorian'izany dia nanitatra azy bebe kokoa izahay ary nametraka baoritra sy padding koa tany amin'ireo faritra nolalovana.
Manoro hevitra anao aho hanao izany. Raha tsy izany dia miakatra avy hatrany amin'ny terrasinao kely ireo zava-maniry.
Raha hametraka baoritra amin'ny faritra midadasika dia tsy mila apetraka mifanila amin'ny iray hafa ianao, saingy tsy maintsy mifanindry izy ireo mba tsy hisy toerana hivoahan'ny tsimparifary.
Voavoly sy mololo
Rehefa vita ny baoritra dia apetrakay ny padding. Hametraka mololo aho. ho hitanao eo amin'ny toerana amarotany sakafo sy akoho. Izaho dia nividy mololo eran-tany maromaro tamin'ny € 3 avy, niaraka tamin'ny bales 2 azonay ho an'ireo dingana 2 noforoninay, ary naka 2 hafa aho hanampiana bebe kokoa rehefa kely sisa mulch.
Nanomboka tamin'ny tsipika izahay rehefa nampianariko anao, fa avy eo nanitatra ireo faritra andalovana. Izany hoe nametraka ny baoritra sy ny mololo tsy ny toerana hambolenantsika fotsiny fa ny alehantsika koa, satria nanafika ny zava-drehetra ny ahitra ary voafehy kokoa izany.
Eto dia mankasitraka ireo terraces roa sy ireo lalan-tongotra 3 izahay. Nametraka padding bebe kokoa amin'ny velaran-tany fambolena isika noho ny amin'ireo faritra andalovana.
Mba hanomezana hevitra anao aorian'ny sosona maromaro ao amin'ny faritra maniry dia manodidina ny 15cm ny mololo.
Ahoana ny fivoarany
Sambany izahay manomana an'ity. Miresaka amin'ny endriny milaza maro aho satria zavatra iray izay efa nataonay tamin'ireo 4 mianakavy. Faly ny zanako vavy.
Mila milaza aho fa aorian'ny 2 volana tsy nanafihan'ny anana, dia tonga lafatra. Manomboka mahita izy hoe misy ahitra mandalo ao anaty baoritra, saingy azo fehezina tanteraka ny zava-drehetra.
Ny toerana tena tokony hitehirizanao ny fifehezana dia ao amin'ny lavaka itaizanao, satria rehefa manala ny baoritra ianao dia mivoaka eo.
Aorian'ny 2 volana amin'ny laharana voalohany dia mbola mitana tsara ihany izy, tsy maintsy manala ahitra vitsivitsy mivoaka isika satria nihasimba tao anaty orana ny baoritra, mihoatra ny 100 l / m2 no nianjera tamin'ity fahavaratra ity tamin'ny tafiotra mahery.
Andao hojerentsika ny fomba fivoarany sy ny fomba fisorohana ny ahitra tsy hanjanaka ny zava-drehetra
Zavatra izay tsapako tato anatin'ny herinandro.
Namboly legioma mila rano betsaka toy ny zucchini miaraka amin'ny hafa aho izay misy fotoana ilain'izy ireo ny adin-drano, mangetaheta, ohatra ny cayenne. Raha tsy mangetaheta izy ireo dia tsy manindrona firy ary niaraka ny zava-drehetra dia tsy voafehiko izany.
Amin'ny manaraka dia mila mamboly misaraka ianao.
Galeria sary Orchard
1 Inona daholo izany rehetra izany
2 Fanjakana voalohany
4 Fanomanana ny tany
5 Fanomanana padding
7 Takelaka taratasy
8 Voavoly sy mololo
9 Ahoana ny fivoarany
11 Galeria sary Orchard